BadeBOTTI.CH – Soisa tany am-boalohany satria 2004 | AB CHF 1699.- avy amin'ny teti-bola ho manokana – BadeBOTTI.CH Soisa mafana am-boalohany koveta Sauna Garden trano falafa – Kovetabe fandroana mafana Outdoor Sauna Jacuzzi – Fitsaharana sy ny fialam-boly ao an-trano – Badefass – Gartensauna – trano falafa handcrafted
Ry Wellness Friend
The Hot kovetabe fandroana; Ny fahatsapana tena tsara ho an'ny vatana sy ny fanahy … taona rehetra manodidina …
Baden tamin'izany andro izany hankafy ny rivotra madio ao amin'ny rano mafana-kalamanjana sy ny.
Ny tsy fitovian'ny mafana sy ny mangatsiaka dia fahafinaretana manokana. Izany zava-nitranga dia bebe kokoa ny rano mamirapiratra kokoa amin'ny alalan'ny sy ny fanorana.
NY barika Sauna;Fialam-boly sy ny fialan-tsasatra ara-pahasalamana tsy miankina amin'ny rivo-piainana ao an-trano …
Ny endrika miavaka ianao dia afaka mankafy ny kilasy voalohany mafana indrindra – Ny lafiny Compact manao ny Sauna ho saika any amin'ny tany rehetra misy. Ny tampon-trano ivelan'ny fitaovana ho ela velona sy maro ny fifaliana no mahatonga.
Ny BBQ Hut / Subscribe trano; Ny tonga lafatra koa ny zaridaina …
Mipetraka miaraka amin'ny fianakaviany sy ny namany, Cook, grillieren, mihomehy sy miresadresaka ny maraina Breaks. Ny Subscribe House no tsara indrindra lay lohataona – Ny trano bongo mitono hena Voaro ny tanteraka firavaka ho an'ny fotoana rehetra.
Ny fampiasam-bola izay hitondra anao taona maro fahafinaretana!
Ny vokatra dia azo jerena ao amin'ny manaraka karazana hazo (Price hafa):
Maneran-tany an-tsambo izahay – Mangataha ny CHF / EUR / USD Price List.
(42,662 Mpitsidika izay nihevitra ity lahatsoratra ity)
18 thoughts on "TONGA SOA”
Eleonore Griesser hoy i:
26. Mey 2014 amin'ny 15:22
Ampidiro ny vidin'ny lisitra ho an'ny kely Kovetabe fandroana mafana.
Raha toa ka azo atao tsy misy lafaoro, mba ho mandroboka dobo.
Misy lahateny ny safidy ho any Aotrisy?
26. Mey 2014 amin'ny 15:50
Tsara ny andro Ramatoa Griesser
Misaotra anao noho ny nanontany. Manana dobo mandroboka boribory lavalava (LxBxH 100x80x100cm) na manodidina Hot koveta Standard-dalana avy amin'ny 160cm savaivony. Mazava ho azy, dia afaka mividy manokana Kovetabe fandroana mafana koa ny aminay. Raha toa ka mila ny hazo tatỳ aoriana, na herinaratra fatana fanafanana, Afaka mividy izany koa nachträglichh amintsika isam-batan'olona. Rehefa avy Aotrisy no manome mivantana avy amin'ny famokarana.
Fa fametrahana an-trano, dia fahazoan-dalana ny antsitrika barika / Ofuro ny Canadian mena sedera izay efa azo avy amin'ny savaivony 120cm sy ny haavon'ny 92cm. Io hazo no mety ho fampiasana an-trano, satria manana afa-tsy kely, ary dia toy izany no fihetsika shrinkage ny fandroana na Sauna hihena dobo, raha mbola tsy ampiasaina mafy.
Izahay efa naniraka anao ny vidin'ny Euro Lisitry ny e-mail ho anao.
Steiner Janine hoy i:
18. Mey 2014 amin'ny 15:26
Izahay mitady hazo barika amin'ny lafaoro (ivelany).
Mba andefaso izahay nanolo-kevitra ny vidiny lisitra.
18. Mey 2014 amin'ny 15:31
Tsara ny andro Frauensteiner
Misaotra anao noho ny nanontany. Manana isan-karazany ny fandroana ivelan'ny trano barika amin'ny lafaoro – avy amin'ny mora ny manokana.
Mba jereo ny mailaka, ny nangatahana antontan-taratasy no nalefa tany aminao.
BADEFASS Baden in-kalamanjana .. Ny Cedar mafana koveta natao ny Clear… (12,930)
ZARIDAINA Sauna Ny kely Wellness lonaka eo amin'ny saha .. NY barika Sauna mamela anao… (6,762)
Wooden HOT kovetabe fandroana Ny mahazatra mafana koveta amin'ny hazo fatana avy any Avaratra KANADA Natura no… (6,745)
Product BADEFASS Tsipiriany bebe kokoa momba ny mafana tubs - Tolotra dia hita ao amin'ny katalaogy.… (6,322)
Visitors fanontaniana / Prices Eto isika dia efa voatanisa mpitsidika fangatahana rehetra amin'ny valin-ho anao. manana… (5,057)
Price list Ny fitsipika Price lisitra ahitana: Hot koveta Garden Sauna Calvin Grill House BBQ trano bongo fatana Camping pod Sauna… (4,733)
Outdoor Sauna Harvia Primo Subscribe mpivarotra Wood-mirehitra fatana Wellness Price WellnessFASS PrimoGRILL Sauna Katalog Saunahütte Red Ceadr Fireplace Whirlpool Garden fandroana Cedar Visitors fanontaniana Craft Outdoor lafaoro Holzwanne Fanontaniana Dampfkabine Soisa Papers ThermoWood SaunaFASS Oak Fitaterana Voalohany Keramikgrill Price fanadihadiana Kiefer White Cedar Under Aotrisy Fifandraisana Wellness-CHAT Sauna Pod HOT kovetabe fandroana Katalog Clearance Anarana fandroana Wellness barika References Garden kovetabe fandroana Hot kovetabe fandroana eMail Subscribe House Prices